Top Cheap - Tilmaamaha wax iibsiga si aad uga iibsato jaban internetka
Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Caafimaadka
Qalabka iyo fiilooyinka
Guriga iyo Jikada
TV iyo Video
Ka hel waxaad u baahan tahay dhammaan qaybahayada
Haddii ay kugu adag tahay inaad hesho hagaha wax iibsiga ee badeecad gaar ah, waxaad isticmaali kartaa mashiinka raadinta, kaas oo shaandhayn doona kumanaan falanqayn oo aanu samaynay si aanu isku dayno inuu ku caawiyo.
Qaybaha ugu caansan
Godka ciidda carruurta
Wax badan oo ku dhaca dhallaanka
Wax badan oo ku saabsan Caafimaadka
Wax badan oo ku saabsan xisaabinta
Wax badan oo elektaroonik ah
Wax badan oo guriga ah
Wax badan oo ciyaaraha ah
Maxaan ku samaynaa Top Baratos?
En Raqiis Sare waxaan ku leenahay isticmaalayaashayada. Waxaan rabnaa inaad awood u yeelatid inaad hesho faallooyin daacad ah iyo fikradaha alaabada wanaagsan oo raqiis ah in aad rabto in aad iibsato. Iyada oo loo marayo hagayaashayada wax iibsiga, waxaad heli doontaa fikrad cad oo ku saabsan waxa aad u baahan tahay, had iyo jeer mudnaanta koowaad siiya qiimo lacag.
Intaa waxaa dheer, waxaan rabnaa inaan awoodno inaan kaa caawinno alaab kasta, qayb kasta. Hagaag waxaad tihiin waalid u raadinaya alaabta ugu fiican ilmahaaga, si fiican baad tahay degaanada Kombuyuutarrada raadinaya kuwii ugu dambeeyay tiknoolaji, at Top Baratos waanu kugu fikirnay.
Maxaad ka heli doontaa Top Baratos?
Tilmaamaha wax iibsiga ugu dambeeyay
Bal eeg hagaha wax iibsiga ugu dambeeyay Waxaan sameynay:
Noo soo qor
Sare jaban 2022 - Siyaasadda Asturnaanta - Macluumaadka ku saabsan buskudka